Okporo ụzọ: Nke mbụ, blog dị ka magnet na ebe nrụọrụ weebụ gị. Oge ọ bụla ị biputere blog ọhụrụ, a na-adọta ndị ahịa azụ na saịtị gị iji gụọ ya. Site n’ebe ahụ, ọ bụ nanị obere ngwepụ na nzọụkwụ na peeji nke ngwaahịa gị. Ịdebe blọọgụ mgbe niile na-eme ka okporo ụzọ na-agbanye, nke bụ isi ihe na-eme ka ị gbanwee ahịa.
Njikọ njikọta: Nke abụọ, oge ọ bụla onye ahịa na – agụ blog gị, ha na – eche na ejikọrọ ha na akara gị. Ha na-amụtakwu banyere gị ma na-eto eto iji tụkwasị gị obi. Ọnụ ọgụgụ na-egosi na karịa 95% nke ndị ahịa adịghị njikere ịzụta n’aka gị ozugbo. Ja puko, zụlite ha nke ọma ruo mgbe ha dị njikere ịzụta.
Nyocha njirimara search: Google hụrụ ebe nrụọrụ weebụ na-emelite mgbe niile. Ha na-ahụkwa blọọgụ bara uru dị omimi. Online na-echekwa na biputere blọọgụ mgbe niile a na – ahọrọ elu karịa ndị na – enweghị. Otu blog na-enyekwa gị ohere iji ọtụtụ isiokwu ndị na-enyere Google aka ịghọta na kategorizirati azụmahịa gị. Site na ọde blọgụ, ị ga – enwekwa ike ịnye njikọta na ebe nrụọrụ weebụ gị, nke Google na – eji tụọ ikike gị. Mgbe ụlọ ahịa gị n’ịntanetị dị elu, ị ga-enwetakwu okporo ụzọ, na ọtụtụ ahịa.
Ja puko, bilo koje niile kwetara, ọde blọgụ dị oke mma maka azụmahịa azụmahịa gị. Nanị akụkụ dị egwu bụ ịchọpụta ihe ị ga-ede banyere blog. Nnukwu atụmatụ nwere ike inyere gị aka, m kwenyere na ya ike nke ịhazi ọdịnaya gị. Enweela m ihe ole na ole iji malite.
5 5. Kacha ọhụrụ oru Vijesti
7 7. Budite kreativni!
Jiri blog gị kọwaara ihe mere i ji malite ụlọ ọrụ, na ihe samo ngwaahịa ndị ahụ ji dị gị ezigbo mkpa. Buru uzo, n’eziokwu, na imeghe, ndị ahịa gị ga-atụkwasịkwu gị obi.
Ị nwekwara ike iji blog ka ndị ahịa mara ihe na-aga n’azụ Mpaghara. Gwa ha ihe ị na-aga, ma kọọ ha na mgbasa glede na-abịa. N’okpuru ebe a, lelee Helm (ụlọ akpụkpọ ụkwụ akpụkpọ anụ) na-eme ka ndị na-agụ ya ruo oge ha na ntanetị.
Jiri blog gị iji gosi ndị ahịa ihe ọmụma gbasara ngwaahịa gị. Enwere nnọọ ihe ị na-agwa ndị mmadụ na ibe gị. Otú ọ dị, site na iji blog, ị nwere ike inweta nkọwa zuru ezu karị. Ị nwere ike igosi ndị ahịa otú e si eji ya, otu esi eme ya, na ihe ọ bụla ọzọ dị mma.
Blog gị bụ ụzọ dị mfe ma dị mfe iji kpọsaa ngwaahịa ọhụrụ ma ọ bụ mee ememe dị ịrịba ama. Ihe omuma a di n ‘ozo na egosiputa ulo oru tenisice’ Ejuputa ahihia ‘n’ikwu ọkwa ohuru. Ọ bụ ụzọ dị mfe iji gosi ndị ahịa ị na-etolit, na-echekwa ha.
5. Kacha ọhụrụ oru Vijesti
Biloị na-amalit ịhụ blọọgụ blọọgụ na isiokwu. Ntak-a? Maka otu Google nwere gosipụtara mmasị maka ogologo, na-agụ ihe omimi, ma mee ka ha dị elu. Ma ọ bụkwa n’ihi na ọ na-eme ka ndị mmadụ na saịtị gị dị ogologo ma na-enyekwu ozi. Otu ụzọ isi mee nke ahụ bụ ogologo oge ‘iche echiche’ ma ọ bụ ikwu okwu na ụlọ ọrụ ahụ.
Ihe kacha mma banyere ịde blọgụ bụ enweghị iwu! Nwee echiche na iche n’èzí igbe. Ị nwere ike ịde blog banyere ihe ọ bụla nwere njikọ ụfọdụ na ngwaahịa gị na ụlọ ọrụ gị. Bụrụ na ị na-ere nri artisan, blog banyere ntụziaka ị hụrụ n’anya. Echela na enwere gị ike iji ụfọdụ usoro ma ọ bụ ntụziaka. Jiri blog gị iji gosi onwe gị.
Ụlọ ọrụ ọ bụla nwere kalenda pụrụ iche nke ihe omume. Napravite TechCrunch. Lọ ọrụ ndị na-atọ ọchị nwere Comic-Con. Lọ ọrụ egwú nwere Coachella na SXSW. Lọ ọrụ npr. Wuregwu ndị dị egwu nwere X-Games. Ọ bụrụ na ị na-ere ngwaahịa na ọrụ ndị a, gbalịa ịga ihe ndị a. Dee n’azụ ihe njirimara nke na-etinye ndị ahịa gị. Ọ na-egosi ha na ị nọ n’obi ụlọ ọrụ gị. Ọzọ, ọ na-eme maka kediegwu ọdịnaya!
Dịka ị pụrụ ịhụ, zagrliti ọtụtụ echiche okike n’ebe ahụ ka ị malite ịde blọgụ. Jiri aghụghọ ndị a, ị dịghịkwa mgbe ị ga-enwe nsogbu site na onye dere edemede ọzọ! Ka ọ dị ugbu a, ị ga-ahụ okporo ụzọ na ahịa gị na-amalit ịmalite elu.
Ụlọ ahịa gị n’ịntanetị ọ nwere בלוג? O nwere ike ịbụ naanị ihe dị